रगत अभाव रोक्न जे.के.ले गर्यो रक्तदान - Gandaki Sandesh
पोखरामा देखिएका रगत अभाव पुर्ति गर्नको लागि नेपाल रेडक्रस सोसाईटी्रले रक्तदान गर्न आह्वान गरेको छ । कोरोन संक्रमणका लागि रगत संकलन गर्न समस्या भएको र रगतको माग पनि बढेकोले अभाव देखिएको हो । रगत अभाव रोक्नको लागि पोखरा १७ मा रहेको जे.के. ट्रेडर्सले आफ्ना कर्मचारीहरुको रगत संकलन गरेको छ । रगत अभाव पुर्ति गर्नको लागि गरिएके रक्तदान कार्यक्रममा ६० युनिट रगत संकलन भएको जे.के. टे«डर्सको प्रमुख जनक काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । नेपाल रेडक्रस सोसाईटी पोखरा १७ उपशाखाको प्राबिधिक सहयोगमा रक्तदान गरिएको हो ।
नवरात्रीको तेस्रो दिन चन्द्रघण्टाको पूजा कसरी गर्ने ?
पिण्डजप्रवरारुढा चण्डकोपास्त्रकेर्युता । प्रसादं तनुने महं चन्द्रघण्टेति विश्रुता ।। नवरात्रि भरि हामी नौ देवीको पुजा आराधना गर्छौं । नवरात्रिको तेस्रो दिन अर्थात आज चन्द्रघण्टाको पुजा आराधना गर्नु पर्छ ।... Read More